टिकटकमा दाङको एउटा सडक पनि भाइरल ! – Satyapati
Loading... आजः १ जेष्ठ २०७८, शनिबार
टिकटकमा दाङको एउटा सडक पनि भाइरल !
दाङ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुराहरू भाइरल (रातारात चर्चा) भएको पाइन्छ । दाङको एउटा सडक पनि टिकटकमा हिजोआज भाइरल हो । जुन सडक अवलोकन गर्न दैनिक सयौँ संख्यामा मानिसहरू आउने गरेका छन् ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्न सडक करिब एक सातायता सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै भाइरल भइरहेको हो । घोराही–१०, नारायणपुरदेखि वडा नं.११ हुँदै १२ को सिमलकुटीसम्म करिब ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।
उक्त सडक अन्तर्गत घोराही–११, झुम्केटाडी निकै भाइरल भइरहेको छ । त्यहाँ भिडियो बनाउनको लागि जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट टिकटक प्रयोगकर्ताहरू पुग्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भिडियोदेखि पछि आफू पनि हेर्न आएको तुलसीपुरकी कल्पना डाँगीले बताइन् ।
‘टिकटकमा निकै भाइरल भएको थियो, कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आएको हौँ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य दिनभन्दा विदाको दिन निकै भीडभाड हुँदोरहेछ, यहाँ अरू कुनै हेर्ने चिज त छैन, सबै सडकमा फोटो खिच्नेदेखि भिडियो बनाउन आउने रहेछन् । तर, उक्त क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम बढी छ । धेरै भीडभाड र सवारी साधनको चाप पनि बढी हुँदोरहेछ ।’
त्यस्तै शान्तिनगर–२, अमुवाबाट भाइरल सडक हेर्न आएका गणेश खत्रीले पनि सामाजिक सञ्जालबाट आफूले थाहा पाएको बताए । उनले विदाको दिन भएकाले कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आएको समेत बताए ।
‘सडक त धेरै बनेका छन् । तर, यो सडक भाइरल भएको देख्दा के रहेछ भनेर आएका छौँ,’ उनले थपे, ‘आज शनिबारको दिन यहाँको दृश्य हेर्दा म आफै दंग परे । यति धेरै मानिसहरू सडक हेर्न आउँदा रहेछन् । यो सडक सर्पजस्तै घुमेकाले पनि भाइरल भएको होला ।’
त्यस्तै, साथीहरूले भनेपछि यो भाइरल सडक हेर्न तुलसीपुरबाट आएको अर्का सुनील सुनारले बताए । उनले भने, ‘खासै त केही रहेनछ, सडक घुमाउरो रहेछ । मानिसहरूको भीडभाड एकदमै हुँदो रहेछ । हेर्दा रमाइलो लाग्दो रहेछ ।’ उक्त ठाउँमा युवायुवतीहरूको चहलपहलले गर्दा स्थानीय पनि अचम्म परेका छन् ।
स्थानीय डिल्लीबहादुर वलीका अनुसार करिब एक हप्तादेखि उक्त ठाउँमा धेरै चहल पहल बढ्दै गइरहेको छ । उनले सडक कालो पत्रे भएको र सर्प घुमेको जस्तै भएकाले टिकटक बनाउनेहरू गर्दा भाइरल भएको बताए । साथै, अन्य दिनमा भन्दा विदाको दिन धेरै युवायुवतीहरू भिडियो बनाउने फोटो खिच्न आउने गरेको समेत उनले बताए ।
‘यहाँ हेर्नको लागि अरू कुनै ठाउँहरू छैन । यो सर्प जस्तै घुमेको सडक मात्र हो,’ उनले भने, ‘एक हप्ताजति भयो दैनिक सयौँको संख्यामा युवायुवतीहरू आउने गर्दछन् । हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ । तर, यहाँ दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ । टिप्परहरू पनि यहि बाटो हिँडेका हुन्छन् । सडकमा टिकटक भिडियो बनाउनेको अत्याधिक भीडभाड हुन्छ ।’
यो सडक निर्माण सम्पन्न भएको करिब ३ महिना जति भएको उनले बताए । उक्त सडकमा टिकटक भिडियो बनाउने फोटोहरू खिच्नेहरू मात्र खुशी भएका छैन् । त्यो चहल पहल देख्दा स्थानीयहरू पनि खुशी भएका छन् । सडकले गर्दा आफूहरूको ठाउँमा यस्तो चहलपहल भएको भन्दै स्थानीय एकराज डाँगीले खुशी व्यक्त गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू केही दिन सबैथोक छोड्नुस्, जनता जोगाउन मिलेर लागौं’
कोरोना ग्रस्त भारतमा शक्तिशाली ‘टोकटे’ चक्रवातको खतरा
जसपामा महन्थ ठाकुर पक्षलाई कारबाही !
भोक मेटाउँदै एमाले, ३० रुपैयाँमा बिरामी र कुरुवालाई खाना
परराष्ट्रद्वारा ११ देशमा राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस (नामावली)
पशुपालनमा एन्टिवायोटिकको दुरुपयोग
कोरोना जितेका हुमबहादुरको पुनःजन्म, परिवारमा खुसीयाली
सल्यानका किसानको पीडा, ‘लकडाउनमा कसले खाइदिन्छ हाम्रो काफल ?’
डब्ल्यूएचओले भन्यो, ‘भारतको अवस्था चिन्ताजनक, नेपालमा आपतकालिन अवस्था’
कोरोनाबाट बाँकेमा थप आठको मृत्यु